श्रीकृष्णको उपनामले चिनिने प्रकाश चन्द के हिरो बन्दै छन् ? रातारात भोजराज, प्रकाशको घर किन पुगे ?(भिडियो) – Sandesh Press
December 24, 2020 221
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड-नेपाल पक्षले महासचिवमा आज नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ । आज अपराहन्न १ बजे बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट महासचिव विष्णु पौडेललाई हटाएको निर्णय गरेर महासचिवमा नयाँ नियुक्तिको तयारी गरेको हो ।
प्रचण्ड-नेपाल पक्षबाट भने धेरै जनाले आंकक्षा देखाएकोले को महासचिव बन्छ भन्ने बारे अझै यकिन हुन सकेको छैन ।
नेताहरु भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र बर्षामान पुनले महासचिव बन्ने इच्छा देखाएको बताइएको छ ।
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले जनार्दन शर्मा र बर्षमान पुन मध्ये एकलाई महासचिव बनाउने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै नयाँ अध्यक्ष बनेका माधवकुमार नेपालले भीम रावल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सुरेन्द्र पाण्डेलाई महासचिव बनाउन जोड दिएका छन् ।
पार्टी बिभाजनको अहिलेको बेला झलनाथ खनालले कुनै माग नराखेको र माधवकुमार नेपाललाई सजिलै अध्यक्ष स्वीकार गरेकाले खनालकै इच्छामा सुरेन्द्र पाण्डे महासचिव बन्न सक्ने अड्कलबाजी पनि भइरहेको छ ।
प्रचण्ड-नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज १ बजे बबरमहलस्थित कार्की पार्टी प्यालेसमा बस्दै छ । यहि बैठकले महासचिवको नियुक्ति गर्ने तयारी भएको हो ।
त्यस्तै प्रचण्ड-नेपाल पक्षले हालका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्षमै राख्ने प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ । आफ्नो पक्षमा आए उपाध्यक्ष पद कायम नै रहने बताइएको छ । त्यस्तै सचिवालय सदस्य र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई पनि प्रचण्ड-नेपाल पक्षले उपाध्यक्षको प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ ।
त्यस्तै आजै नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दै छ । केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेर ११ सय ९९ सदस्यीय बनाएको ओली पक्षले नयाँ केन्द्रीय सदस्यहरुका लागि दुई प्रशिक्षण समेत दिएको छ ।
Prevफाँ ‘सी ल’गाएको अभिनय गरेर TikTik बनाउँदा अचानक कु’र्सी चि’प्लिएर, युवतीको ज्या’न ग’यो
गुल्मीमा ३ युवक घरमा छिरेर बुहारीलाई लिएर बेपत्ता, सासु नजिकै मृताअवस्थामा फेला परिन
बिमान उड्नु अगाडी खिचेको तस्बिरले संसार रुवायो,एकै परिवारका ५ जनाको मृ त्यु